Ɔmanpanin Nsrahwɛ Wɔ Bonomantan Mu - HOT STORIES GHANA
Ɔmanpanin Nsrahwɛ Wɔ Bonomantan Mu
Ɛnnɛ dadua yi, wɔ Ɛbɔ bosome da a ɛtɔso du, Ghana Manpanyin Nana Addo Dankwa Akuffo Addo abɛpue wɔ Bonomantan yi mu.
Ɔmanpanyin hyɛɛ n’aprɔbɔ no ase wɔ Ghana Radio Kɛseɛ GBC nkorabata Radio BAR 93.5Mghz asoeɛ a ɛwɔ Sunyani, Bonomantan no kuropɔn mu.
Ɔmanpanyin Nana Addo a ɔregyina wɔ n’amanyɔkuo NPP din mu apere mfeɛ nnan bio aka deɛ w’adi dada noho, ne Owura Tony Goode twetwee nkɔmɔ faa Bonoman mpontuo ho, ne nsɛm pii a Ɔmanpanyin no ne n’aban ayɛ, ne deɛ ɔbɛyɛ bio, sɛ Ghanafoɔ sane to aba ma no tena abandwa noso bio a.
Mpaninfoɔ se: “sɛ w’anka sɛ mewɔ a, obi nnka sɛ wo wɔ”.
Ne saa nti, Ɔmanpanyin hyɛɛ aseɛ bɔɔ neho aba so, kaa mpontudwuma ahodoɔ a wayɛ wɔ Bonomantan no mu ɛfiri bere a Ghanafoɔ de wɔn kokrobetie yii no sɛ ɔnkura afena nni Ghanaman anim nkɔ ɔkoo no.
Ɛfa akwanyie ho, ayaresabea, kuadwuma ne asukuufoɔ adesua ho.
Ɔkasa faa atea/cashew a ɛyɛ aduaba titiriw a abɛpue Bonomantan mu ha a akuafoɔ beberee de wɔn werɛ ahyɛ mu ne ne dua ho. Ɔde Ghana cashew kuayɔ no totoo Abigyanfoɔ (Cote d’Ivoire) deɛ ho, sɛ saa man no a Ghana ne no bɔ hyeɛ, wɔ Ɔbɔadeɛ kuayɔ asaasepa korɔ, nanso, ɛsane nhyehyɛɛ pa a ɔmo Aban de ato hɔ nti, cashew akuafoɔ a ɛwɔ Abigyan no nya mfasoɔ twitwiridie wɔ wɔn aduaba no mu sene Ghanafoɔ no.
Ne saa nti, ɔde nnoɔma atoto nekwan so a, cashew nso bɛnya baasomkuo a ɔmo de nnoɔma retoto naakwan so a ɛnkyɛ Ghana cashew akuafoɔ no bɛtwa ɛso aba.
Owura Tony Goode sane bisaa Ɔmnpanyin asɛm faa DKM nsɛmsɛm a saa sikakorabea no dii Ghanafoɔ ne titiriw, Bonofoɔ, dwirim, faa wɔn sika a wɔde kɔsiee wɔn asoeɛ no ho.
Na Ɔmanpanyin yii no ano sɛ, sɛdeɛ w’ahyɛ aseɛ dada retua wɔn a wɔn sika akɔdi DKM nkyɛn no, nekorakora, ɛnkɔsi Ɛbɔ bosome awieɛ deɛ, na obi biara a ne sika akɔdi hɔ no, ne nsa aka ne sika.
Ɔmanpanyin de nekasa reba awieɛ no, ɔde adesrɛdeɛ too Bonofoɔ ne Ghanaman anim sɛ: deɛ ayɔ bi da, na yɛka sɛ obɛtumi ayɛ. Sɛ Ghana adehyeɛ hwɛ mpontudwuma a ɛrekɔso wɔ n’abrɛso yi: ‘Free Education’, mmɔfra a wɔkɔ sukuu ntoasoɔ kwa, ne kuadwuma a ɛnnɛ ama ɔman yi abɛyɛ aduane kɛntɛn wɔ Abibirem Atɔeɛ ha a, ɛnneɛ, na w’akyerɛ sɛ ɔnim to, enti Ghanafoɔ mfa no nyina atonoo bio wɔ Ɔpɛnima da a ɛtɔso nson abatoɔ no mu.
Afei nso, Ghanafoɔ hunuu Ɔmanpanyin a ɔtwaa mu kɔeɛ nkyɛee, John Mahama, amanmuo, na sɛ wɔde toto nedeɛ yi ho, na sɛ ɔfata sɛ ɔtumi ne no pere Ghana akonwa kɛseɛ no, na ɛyɛ asɛm sɛ bɛ.
Ɔmanpanyin aporɔbɔ no da so rekɔ so wɔ Bonomantan no mu, Revolution Broadcast bɛkɔso ama mo deɛ ɛfata sɛ moteɛ, na mo kenkan nyinaa.
Tags: Nana Addo Dankwa Akufo Addo Ɔmanpanin
Previous Okyeman Youth Must Stop The Unnecessary Partisan Attack On John Mahama – Progressive Akyem Citizens Cautions